चौरास्तामा पालन हुँदैन विजयोत्सव – खबरम्यागजिन
Homeखबरदार्जीलिङचौरास्तामा पालन हुँदैन विजयोत्सव
चौरास्तामा पालन हुँदैन विजयोत्सव
May 18, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
चुनौती चुनौतीबीचका नगरपालिका बोर्डहरु
मोहन लामा दार्जीलिङ, 18 मई। 2017
गोजमुमोले चौरास्ता परिसरको गरिमा फर्काउने संकल्प गरेको छ, यसैले यसको शुरूआत पार्टीको विजय उत्सवबाटनै गरिनेछ। आगामी 22 मई पार्टीले विजय उत्सवस्वरूप दार्जीलिङ रेलवे स्टेशन परिसरबाट जुलूस निकाल्नेछ अनि सम्भवतः चौकबजार वा मोटर स्ट्यान्डमा विजय उत्सव पालन गरिनेछ।
आगामी 22 मई गोजमुमोले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित एउटा विषयलाई पालन गरेर आफ्नो वचनको पक्का बन्ने प्रमाण दिने भएको छ। जुन हो चौरास्ता परिसरमा कुनै राजनैतिक अनि प्रशासनिक कार्यक्रम नगर्ने। गोजमुमोले नगरपालिका चुनाउलाई केन्द्र गरेर जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा भनेको थियो-चौरास्ता अनि मल परिसरको पर्यटकीय गरिमालाई ध्यानमा राख्दै अबउसो कुनै पनि राजनैतिक अनि सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक पहल गरिनेछ साथै चौरास्ता अनि मल परिसरको गरिमा फर्काइल्याउन यथाशक्य प्रयास गरिनेछ।
यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर आगामी 22 मईको दिन गोजमुमोले विजय उत्सव चौरास्तामा पालन नगर्ने निर्णय निर्णय लिएको छ। यसबारे गोजमुमो सहसचिव विनय तामाङसित सोध्दा उनले भने-गोजमुमोले चौरास्ता परिसरको गरिमा फर्काउने संकल्प गरेको छ, यसैले यसको शुरूआत पार्टीको विजय उत्सवबाटनै गरिनेछ। आगामी 22 मई पार्टीले विजय उत्सवस्वरूप दार्जीलिङ रेलवे स्टेशन परिसरबाट जुलूस निकाल्नेछ अनि सम्भवतः चौकबजार वा मोटर स्ट्यान्डमा विजय उत्सव पालन गरिनेछ। यसै दिननै खरसाङ अनि कालेबुङमा पनि पार्टीले विजय उत्सव पालन गर्ने निर्णय लिएको छ।
यद्यपि, यसपालीको नगरपालिका चुनाउमा कठोर चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भए पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जीलिङ पहाड़का तीनवटा नगरपालिका दार्जीलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङमा भारी मतले विजय हासिल गरेको छ। जसमा पार्टीअघि कठोर चुनौतीहरु पनि प्रशस्तै छन्। जसमध्ये दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगमको दर्जा दिलाउने पार्टीको आश्‍वासन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। किनभने, राज्य सरकारको अनुमति र सहयोगबिना दार्जीलिङ नगरपालिकाले नगरनिगमको दर्जा पाउने सम्भावना अतिनै कम देखिएको छ।
यद्यपि, राज्य सरकारले मिरिक नोटिफाइड क्षेत्रलाई पूर्ण नगरपालिकाको दर्जा दिनसक्ने सम्भावना पनि प्रबल बनेको छ। यसैले अब गोजमुमो आफ्नो यस जीतमा गजक्क भएर बस्ने समय छैन। विजय उत्सवको साटो प्रत्येक वार्डवासी जनताको दुःख बुझ्ने चुनौती छ, जुन दुःखलाई समाधान गर्ने दायित्व पनि छ। किनभने, अब केही महीनापछिनै जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन) साथै पञ्चायतको चुनाउ हुने निश्‍चित छ।
जुन चुनाउमा पनि पार्टीले नगरपालिका चुनाउमा जस्तै जीतको पगड़ी बाँध्नपर्छ भन्ने दार्जीलिङका धेरै जनताको चाहना छ। यस विषयलाई गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि राम्ररी बुझेका छन्, यसैले उनले दार्जीलिङ पहाड़का जनताले यसपालीको नगरपालिका चुनाउमा गोजमुमोलाई अन्तिम मौका दिएको पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। यसैले उनले भनेका छन्-अब दार्जीलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङ नगरपालिका चुनाउमा जीत हासिल गरेर नगरपार्षद बन्ने सबैलेनै जनतासित सम्पर्कमा बसेर अनि सबैसित तालमेल बनाएर असल कार्य गर्नुपर्छ।
नगरनिगमको सन्दर्भमा गोजमुमोले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा भनेको छ-सन् 1850-मा स्थापना भएको दार्जीलिङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि नगरनिगमको दर्जा पाउन सकेको छैन, यसैले दार्जीलिङ नगरपालिकाको ऐतिहासिक गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यस नगरपालिकालाई नगरनिगमको दर्जा दिलाउन गोजमुमोले ठोस पहल गर्नेछ। यदि दार्जीलिङ नगरपालिकाले नगरनिगमको दर्जा पाए दार्जीलिङ शहरका बुनियादी समस्याहरु सहजै समाधान भएर जानेछ अनि बेरोजगार युवा-युवतीका निम्ति पर्याप्त रोजगारको अवसर खुल्नेछ।
तर के गोजमुमोको यस पहललाई वर्तमान राज्यको तृणमूल कंग्रेस सरकारले स्वीकार गर्छ? गोजमुमोको लागि यो प्रश्‍न कठोर लाग्न सक्छ, तर यसमा सय प्रतिशत सत्यता छ। किनभने, गोजमुमो र राज्यको सत्तारूढ़ दल तृणमूल कंग्रेसमाझ 36-को आंकड़ा छ अनि गोजमुमोले चाहेको कुनै पनि कुरा राज्य सरकारले पूर्ण गर्छ भन्नु कदापि उचित ठहर्दैन। यसैले पहाड़का3वटा नगरपालिकामा गोजमुमोले जीत हासिल गरे पनि चुनौती प्रशस्तै छ भने मिरिकमा पनि तृणमूल कंग्रेसको नगरपालिका बोर्डले गतिलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्पश्ट छ। किनभने, मिरिक नगरपालिका बोर्ड गठनपछि राज्यले मिरिकवासी जनतालाई पर्जा-पट्टाको अधिकार दिइहाल्छ?
भाषाको मृत्यु, राजकीय हस्तक्षेप अनि नेपाली भाषा
तृणमूल उम्मेद्वारका पति घाइते-गोजमुमोमाथि आरोप